Fampiakarana saran-dalana : Manao sorona ny vahoaka indray ny mpitatitra -
AccueilSongandinaFampiakarana saran-dalana : Manao sorona ny vahoaka indray ny mpitatitra
Ankatoky ny fifidianana isika izao, ary saika efa miantso ny fitoniana avokoa ny ankabeazan’ireo tompon’andraikitra eto amin’ ny tany ama-manonina miampy ireo eo anivon’ ny vondrona iraisam-pirenena toa ny SADC sy ny TROIKA izay efa tonga teto Madagasikara. Havokavoky ny ain-dehiben’ ny firenena ny fitaterana, ary sarotiny amin’ io rahateo ny vahoaka malagasy, antony nandraisain’ ny fitondram-panjakana andraikitra amin’ ny fampidinana ny vidin’ ny solika izay niakatra farany teo izay niverenana amin’ ny laoniny amin’ izao fotoana izao. Ankehitriny dia ny eo anivon’ ny fitaterana indray no misy mampiasa sy mikendry ny tsy filaminana eto amin’ ny tany sy ny firenena, izay mazava fa fitaovana politika ka ny fampiakarana saran-dalana 700 Ariary no ataon’izy ireo jono hisintonana ny vahoaka hidina andalam-be. Porofo amin’ izany ny efa hita anatin’ ny tambazotran- tsosialy izay miara-dalana amin’ ity hoe fampiakana saran-dalana ity, dia ny fahitana andian’olona maro milaza fa “ dia hipetraka amin’ izao fotsiny ve isika na hitatasika anaty facebook, fa andao hitsangana amin’ izay” hoy ny mpisehatra sasany.
Marihana anefa fa manoloana ny firesahan’ ireo mpitatitra mivantana tamin’ ny mpanao gazety omaly, dia mbola tsy nisy ny antso nataon’ izy ireo tamin’ ny tompon’andraikitra dia ny ATT izany, ireto farany no niantso ireo mpitatitra hiatrika fivoriana ny alakamisy ho avy izao taorian’ ny faharenesana ny hoe fampiakarana tamin’ ny fampahalalam-baovao. Raha nanontaniana moa ny talen’ ny ATT, Andry Rakotondrazaka manoloana ny filazan’ireo mpitatitra fa noho ny tsy fandraisan’izy ireo ny fanampiana na ny “ compensation” no anton’ ny fampiakarana, dia mazava ny fanazavana nentiny “ ny fanampiana ireo mpitatitra amin’ ny elanelan’ ny vidin-tsolika dia nisy foana hatramin’ izay, ny mikasika ny hoe tsy fandraisana izany tao anatin’ ny valo volana dia tsy marina velively. Ireo izay manana taratasy ara-dalàna mikasika ny fiarany ihany no mandray sy mahazo izay fanampiana izany, misy mantsy izao raha haka ohatra isika dia ny lafin’ny taratasin’ ny fiara ny licence no misoratra amin’ ny tompony teo aloha nefa fiara misoratra amin’ ilay mpividy sy tompony vaovao. Dia iza aza no homena ny vola , ilay tompony teo aloha ve sa ilay vaovao. Noho izany izay ara-dalàna ihany no mahazo io fanampiana io” hoy hatrany ny talen’ ny ATT.
Hatreto izany dia voaporofo fa diso, ary mifono zavatra hafa mihitsy ny voalazan’ireo fikambanana mpitatitra maromaro izay nanao fanambarana omaly, taorian’ io fanazavana izay nomen’ ny ATT io. Porofo izany fa mikasa hanao sorona ny vahoaka indray ny mpitatitra.